SEO Zvinyorwa: Zvose Uye Zvakawanda NaSalalt
SEO inomirira "search engine optimization." Ndiyo imwe yenzira dzinonyanya kukosha dzekutora huwandu hwekutengesa kune webhusaiti yako. Mune mamwe mazwi, tinogona kutaura kuti kutsvaga injini kugadzirisa inzira inzira yekufambisa vashanyi vehupenyu uye maonero evanhu pamapeji ewebhu. Yese injini dzokutsvaga dzakadai saBing, Yahoo, neGoogle, iyo ndiyo injini huru yekutsvaga, shandisa maitiro akasiyana-siyana kuisa mapeji ewebhu, zvinyorwa zvakanyorwa, mavhidhiyo uye masayiti nemigumisiro yavo. Iwe unogona kuwana nzvimbo yakanaka mumitsva yekutsvaga injini chete kana waita zvakanaka kutsvaga injini yekugadzirisa. Iyo nzira inobhadharwa, uye iwe unofanirwa kuva wakagadzirira kushandisa mari zvikuru kana uchida kuona nzvimbo yako paji yekutanga yeGoogle kana zvimwe zvinjini.
Lisa Mitchell, Mutariri Wekubudirira Kwemutengi we Semalt Dhidhiro Dhidhijita, anopa pano tsanangudzo yakajeka yemhando dze SEO uye kukosha kwayo.
Pane zvitatu zvacho: chiuno chitsvuku SEO , chikwata chine mutsva SEO , uye jena jena SEO.
Chikwata chitsvuku SEO ndiyo nzira inonyanya kuzivikanwa uye yakashandiswa zvikuru iyo inoshandisa mazano ekuvandudza tsvakurudzo yako yekutsvaga injini..Inosanganisira dzimwe nzira uye nzira dzekuti nzvimbo yako ionekwe mumatsva ekutsvaga injini. Semuenzaniso, iwe unofanirwa kunyora zvigadzirwa zvehutano, sanganisira mamwe mazwi, sarudza webhusaiti yako, HTML nekugadzirisa nekugadzirisa nzvimbo yako maererano nemitemo nemitemo yeGoogle. Izvozvo zvichakubatsira iwe kuve nekuonekwa kwakanaka mumwedzi mishomanana. Kune rumwe rutivi, ruvara rwetsvuku SEO rutsva-kutemwa kuti ruwane zvakanaka mumigumisiro yejini yekutsvaga. Icho hachisi chekugara kwenguva refu uye ine huwandu hwakaipa. Inosanganisira zvisiri izvo chivakwa chekubatanidza , kukopa zvinyorwa nekushandisa kushanda kwebasa rose. Inosanganisirawo mazwi makuru, zvinyorwa zvakavanzika, nekubatanidza pamwe nekuvhara. Grey chikwata SEO inobatanidza zvose zvitsvuku chevha SEO uye tsvuku tsvuku SEO. Mune nzira iyi, haugoni kushandisa nzira dzakanaka dzekuita zviri nani mumajini ekutsvaga, uye nzira dzisina kururama dzinoshandiswa zvizere. Nzira iyi inowanzoshandiswa nemakambani eSeO uye inosanganisira zvakasiyana siyana zvakanaka uye zvakaipa.
SEO Ndiani Anokodzera?
Kutsvaga injini yekugadzirisa inzira yakanaka yekukwevera vanhu vakawanda kune yako nzvimbo uye kuwedzera kutengesa kwako. Iyo ndiyo nzira yakanaka kune avo vanoda kupa bhizinesi ravo mamiriro matsva. Zvakachengeteka kutaura kuti nyika yeInternet yakazara nemazana kuzviuru zvewebsite. Mumamiriro ezvinhu akadaro apo makwikwi acho akasimba, zvingave zvisingaiti kuti webhusaiti yako yebhizimisi igare pasina SEO. Iwe unofanirwa kudzivisa kushandisa mari yakawanda pakushambadzira uye kubhadhara mishandirapamwe. Panzvimbo pezvo, chinangwa chako chinofanira kunge chiri pakuvaka unhu hunoenderana newebsite yako, kunyora injini yekutsvaga-inogamuchirika, nekugadzirisa nzvimbo yako maererano nemitemo nemitemo yeGoogle.
Tsvakurudzo yekutsvaga optimization kana SEO haifaniri kutorwa kuti haibatsiri. Inokosha kune chero bhizinesi. Inosanganisira nzira dzakawanda, nzira, uye mazano. Iwe unofanirwa kubhadhara kune zvose pa-peji SEO uye pane-peji SEO. Kana iwe uchida kuona nzvimbo yako pajiji yekutanga yeGoogle uye uchida kuwedzera kutengesa kwako, iwe unofanira kuenda nekutsvaga injini nekugadzirisa uye kushandisa imwe mari yekubhadhara imwe nyanzvi SEO.